Angovo azo havaozina Vahaolana amin’ny andro ratsy
Tsy maintsy miroso amin’ny fiampitana amin’ny fampiasana ny angovo azo havaozina i Madagasikara.
Tsy vitan’ny hoe hahafahana mikajy ny tontolo iainana fotsiny mantsy izany fa iatrehana ny fiovaovan’ny toetr’andro sy ny andro ratsy misy eto amin’ny firenena. Tsy azo hihodivirana intsony fa tsy maintsy mitodika amin’ny angovo azo havaozina ny firenena, hoy ny avy ao anivon’ny minisiteran’ny tontolo iainana. Hiantraika avy hatrany amin’ny toekarem-pirenena sy ny asa fiharian’ny isan-tokantrano ny ho fiampitana amin’ny fampiasana angovo azo havaozina hoy ny Tale jeneralin’ny Ofisy Nasionalin’ny Tontolo iainana (ONE), Ampialahy Laurent . Manankarena rivotra, masoandro ary ny rano i Madagasikara, hoy izy ka tsy misy antony hisakana amin’ny fandrosoana amin’izao. Izany no antony hanaovan’ny ministera ezaka hanodina ny fako. Eto Antananarivo, Toamasina ary Antsiranana aloha no iantsorohana. Malalaka ity sehatra ity eto amin’ny firenena saingy mila tosika sy fiaraha-miasa amin’ireo mpisehatra sy ireo mpiara-miombon’antoka rehetra, indrindra ny mpamatsy vola. Maro amin’ireo tanora Malagasy ihany koa ny efa mahafehy sahady ary liana amin’ny fampiasana ny angovo azo havaozina